"Embedded system" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"Embedded system" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
Embedded system (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၉:၁၂၊ ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ ရက်နေ့က မူ
၀၇:၁၇၊ ၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၀၉ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
(စာမျက်နှာအသစ်: Category:Embedded systems thumb|300px|A [[router, an example of an '''embedded system'''. Labelled parts in...)
၁၉:၁၂၊ ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
[[ImageFile:ADSLmodemrouterinternalslabeled.jpg|thumb|300px|A [[router]], an example of an '''embedded system'''. Labelled parts includea[[microprocessor]] (4), [[RAM]] (6), and [[flash memory]] (7).]]▼
▲[[Image:ADSLmodemrouterinternalslabeled.jpg|thumb|300px|A [[router]], an example of an '''embedded system'''. Labelled parts includea[[microprocessor]] (4), [[RAM]] (6), and [[flash memory]] (7).]]
Embedded system သည် special purpose computer system deisgned ကိုအသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူကတော့ general-purpose computer ( ဥပမာ [[personal computer]] ) နဲ့ မတူပါဘူး။ သူက လိုအပ်တဲ့ hardware , mechanical parts တွေကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အဲဒါတွေကို general-purpose computer တွေမှာ ရှာလို့မရပါဘူး။ Design engineers တွေက size နဲ့ cost သက်သာအောင် လုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူက စီးပွားရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်တာပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် embedded system ကို digital နာရီများ , mp3 mp4 player စတာတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ system တွေဖြစ်တဲ့ မီးပွိုင့်များ ၊ nuclear power plants system controlling တွေမှာလည်းအသုံးပြုကြပါတယ်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/54752" မှ ရယူရန်